Izindaba - Portable Leeb Hardness Tester KH200
I-Portable Leeb Hardness Tester inganquma kalula futhi ngokushesha ubunzima bensimbi
Isimiso sokuhlola se-Leeb hardness tester ukuthi ngaphansi kwejubane elithile nomzimba womthelela ocacisiwe uphoqa indawo yokuhlola, ukubala inani lobulukhuni kusuka ezingeni le-rebound velocity kanye ne-rush velocity ebangeni elingu-1mm lokuhlola indawo.
I-Portable Leeb Hardness Tester ukukhonjiswa kombala, isikhombimsebenzisi sewindows, kulula ukusebenza futhi kunamandla.
Inani elilinganisiwe lobulukhuni lingaguqulwa ngokukhululekile libe yi-rockwell, i-brinell nezinye izikali zobulukhuni.
1. nge umkhawulo alamu eliphezulu nangaphansi by esethiwe
2. Igobolondo lensimbi, liqinile futhi liqinile
3. Sekela ukushintshwa kwamahhala kwezilimi eziyi-6
4.Ukusetshenziswa kwamandla okuphansi namandla wokugcina amakhulu.Ukusebenza okuzinzile nokwethembekile.
5. Ingakhomba ngokuzenzakalela uhlobo lwe-probe
6.Wide application.Used ukuhlolwa emkhakheni ingcindezi umkhumbi, ezisekelweni for izimoto, die umgodi of isikhunta, esindayo umsebenzi ucezu, futhi imishini efakiwe futhi izingxenye unomphela. ukulawula ikhwalithi kunqubo yokukhiqiza ngobuningi.
7. Iyakwazi ukukhipha idatha.
indawo yokusebenza yomsebenzi evame ukuhlangatshezwa, ukuhlangana nayo, futhi izindawo ezahlukahlukene zinethonya elihlukile emiphumeleni yokuhlolwa kobulukhuni.
umthelela osheshayo owela ebusweni besifanekiso uyefana nowesampula yendiza, ngakho-ke iringi yokusekelwa yendawo yonke yale Thuluzi Lokulinganisa Ubulukhuni, Umhloli Wensimbi Wobunzima uyadingeka
Ngaphansi kwesimo sokusebenza okulungile, umthelela osheshayo uwela ebusweni be-specimen iyefana naleyo yesampula yendiza, ngakho-ke iringi yokusekela yendawo yonke yanele.
Kodwa-ke, lapho i-curvature incane ngokwanele ngosayizi othile, ngenxa yomehluko ophakeme esimweni sokunwebeka kokuguquguquka ngaphansi kwezimo zezindiza, isivinini esiphindayo somzimba womthelela sizobe siphansi, ukuze inani lobulukhuni leLeezer liphansi. Kunconywa ukusebenzisa izindandatho ezincane zokusekela lapho ulinganisa amasampula.
Ngesampula enobubanzi obuncane bokugoba, kunconywa ukuthi ukhethe indandatho yokusekela emise i-hetero.
Isikhathi Iposi: Jun-12-2020